> Resource> Android> Olee otú iji Play MP4 faịlụ na Android ekwentị mkpanaaka na
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ghara ịdị na-egwu MP4 faịlụ gị Android igwe. Ihe kpatara ya bụ na gị na MP4 codec na-adịghị gị na-akwado Android ekwentị. Ugbu a, i nwere ike iji na-atụ aro ike video Ntụgharị n'okpuru. Ọ na-enye ndabere ntọala fọrọ nke nta niile Android igwe. Ọzọkwa na i nwere ike na-emetụ gị MP4 video ntabi na ya edezi ọrụ.
Tọghata MP4 ka Android Ò Kwekọrọ n'Ozizi Format maka Windows / Mac (El Capitan gụnyere)
• Tọghatara ọtụtụ ngwaọrụ, dị ka gam akporo igwe, iPhone, iPad, Game ngwaọrụ, wdg
• Kwado ọ bụla video ọ bụ ọdịyo faịlụ akakabarede.
• Kpaa, akuku, tinye mmetụta, sobtaitel, wdg iji hazie gị video.
• Ọ dịghị àgwà na ọnwụ n'ihi na mmepụta mgbasa ozi faịlụ.
• apụghị Ikweta Ekweta ngwa ngwa ọsọ ndiwet ọrụ gị usoro.
nnọọ jidere a video Ntụgharị maka gam akporo igwe, nke mere na ị nwere ike mfe egwu ọ bụla video n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla.
Akwado ọ bụla Format Nchigharị
Ị nwere ike tọghata video ma ọ bụ ọdịyo na ọ bụla usoro n'agbanyeghị gị faịlụ size.
Dị nnọọ egwu gị talent iji hazie gị video ma ọ bụ audio, na-eme ka a oké masterpiece.
​​Ị nwere ike tọghata a nnukwu faịlụ dị ka a fim ma ọ bụ a TV show na ihe ultrafast ọsọ.
Olee otú iji tọghata MP4 ka Android
Nzọụkwụ 1: Tinye MP4 faịlụ a MP4 video Ntụgharị maka Android.
Pịa "Tinye Files" akara Ibu Ibu gị MP4 video. Ma ọ bụ nanị ịdọrọ gị MP4 video ka usoro ihe omume window. Mgbe ị na-ịgbakwunye MP4 faịlụ, ha ga-egosi dị ka thumbnails ke item tree. Ị nwere ike idozi na iji, ịgbanwe faịlụ aha, họrọ ọdịyo ma ọ bụ sobtaitel ọ dị mkpa.
2. Họrọ gị gam akporo ngwaọrụ dị ka mmepụta
Pịa format na akara ngosi na "mmepụta Format" ebi ndụ. Na ngwaọrụ, Atiya, ị ga-ahụ dị iche iche ika igwe. Ebe a, ị nwere ike nweta fọrọ nke nta niile Android ekwentị ụdị. Ị nwere ike họrọ otu dị ka gị Android ekwentị. Mmepụta format bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Android ngwaọrụ.
3. tọghata MP4 ka gam akporo igwe
Kụrụ tọghata button, na mgbe ahụ, a video Ntụgharị ga-eme MP4 ka Android nsụgharị ozugbo. Ọ bụ nnọọ oru oma na akakabarede na ọganihu mmanya ga-egosi gị oge fọdụrụ.
Ya mere ugbu a niile MP4 faịlụ nwere ike na-egwuri na gị gam akporo igwe were were, ekele dịrị! Converting MP4 ka Android apụghị ịbụ mfe na nke a kenka ngwá ọrụ, na-amalite ugbu a na-egwu MP4 on Android igwe.
Video Tutorial: Olee otú iji tọghata MP4 ka Android ekwentị mkpanaaka na
Ajụjụ banyere igwu MP4 on Android
Ajụjụ: Olee nyefee MP4 n'etiti kọmputa m na Android ekwentị?
Ị mkpa iji wụnye a atọ - ọzọ omume mbụ. Kies nwere ike ịbụ gị nhọrọ kasị mma, nke na-enyere gị mfe jikwaa ihe niile na Android site na PC gị ma ọ bụ Mac.
Ajụjụ: MP4 na-eze nabatara dị ka a na-akwado format m Android ekwentị. Gịnị mere m ka nwere ike na-egwu ya?
MP4 bụ multimedia akpa na video na ọdịyo dị iche iche codec. Otú ọ dị gị MP4 codec bụ dakọtara na ekwentị gị. Na nke a, dị nnọọ na video Ntụgharị kacha inyere gị aka.
Top 5 Free MKV ka MP4 Ntụgharị maka Windows / Mac